Kiiska Ganacsi ee Maareynta Hantida Dijital ah | Martech Zone
Dacwadda Ganacsiga ee Maareynta Hantida Dijital ah
Isniin, Janaayo 27, 2014 Isniin, Janaayo 27, 2014 Jenn Lisak Golding
Adduunyada faylalkayada badankood (ama dhammaantood) feylal ahaan loogu kaydiyo ururrada, waxaa lagama maarmaan ah inaan wadno u helno waaxyo iyo shaqsiyaad kala duwan oo galaangal ugu leh faylalkaan hab abaabulan. Marka, caan ahaanshaha xalalka maareynta hantida dijitaalka ah (DAM), ee u oggolaanaya dadka isticmaala inay soo rogaan feylasha naqshadeynta, sawirrada keydka ah, bandhigyada, dukumiintiyada, iwm ee keyd guud oo ay ka heli karaan dhinacyada gudaha. Waxaa intaa sii dheer, luminta hantida dijitaalka ah ayaa si aad ah hoos ugu dhacaysa!
Waxaan la shaqeeyay kooxda Widen, a xal maaraynta hantida dijitaalka ah, ee ku saabsan boggan macluumaadka, sahaminta kiiska ganacsiga ee maareynta hantida dijitaalka ah. Waa wax iska caadi ah ganacsatadu inay adeegsadaan wada wadaag ama si fudud u weydiistaan ​​kuwa kale inay u soo diraan feylal ahaan emayl, laakiin kuwani caddayn ma noqon karaan. Sahamintii ugu dambeysay, 84% ganacsiyada waxay ku soo warrameen in helitaanka hantida dhijitaalka ah ay tahay caqabadda ugu weyn ee haysata markay la shaqeynayaan hantida dijitaalka ah. Waan ogahay inta xanuunkiisu leegyahay iyo inta waqtiga iga luntay markaan file ka heli waayo arjigayga emailka ama faylalka kumbuyuutarkayga. Laakiin qiyaasi jahawareerkaas ka jira goob shirkadeed oo ballaaran oo ay la joogaan shaqaale badan; taasi waa waqti badan oo lumay, hufnaan, iyo lacag.
Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale abuurtaa dhibaatooyin u dhexeeya waaxaha. 71% ururadu waxay leeyihiin dhibaatooyin siinta xubnaha kale ee shaqaalaha helitaanka hantida ururada dhexdooda ah, taas oo yareyneysa wada shaqeynta waaxyaha. Haddii aanan si fudud ku siin karin naqshadeeyehayga dukumiinti kooban, markaa shaqadiisa ma qaban karo. DAM waxay siisaa waddo qof walba oo ururka ka mid ah uu ku heli karo dhammaan hantida dijitaalka ah ee ay ugu baahan yihiin bakhaar abaabulan. Iyada oo la adeegsanayo 'DAM', waxyaabaha si dhakhso leh oo waxtar leh ayaa loo sameeyaa.
Hadda miyaad isticmaaleysaa xalka maareynta hantida dijitaalka ah? Dhibaatooyin noocee ah ayaad la kulantaa markaad la macaamilayso hantida dijitaalka ah ee guud ahaan ururkaaga?
Tags: Content Suuqxidheenkahantida dhijitaalka ahmaaraynta hantida dijitaalka ahimagesdhexgalkaFiidiyowyada Suuqgeyntaboodhhantida fiidiyowgakeydinta fiidiyowgafidin
LinkedIn: Top 25 Khubarada Warbaahinta Bulshada ee Raac
Waxyaabaha ugu Muhiimsan Warbixinta Tusmada Macaamiisha Bulshada